(ဃ)-ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်အသင်းမှ လွှဲ‌ွပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သော CSR ရန်ပုံငွေအား မော်လူးရတနာမြေဒေသခံများထံ မည်သည့်နေ့ရက်တွင်ပေးအပ်မည်၊ လွှဲ‌ွပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်‌့ CSR ရန်ပုံငွေ၏ပမာဏနှင့်အခက်အခဲများကို ရှင်းပြပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ (၂၄. ၅. ၂၀၁၉)
မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်အသင်းမှ လွှဲ‌ွပောင်းပေးအပ်ခဲ့သော CSR ရန်ပုံငွေအား မော်လူးရတနာမြေဒေသခံများထံ မည်သည့်နေ့ရက်တွင်ပေးအပ်မည်၊ လွှဲ‌ွပောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်‌့ CSR ရန်ပုံငွေ၏ (အရင်း၊ ဘဏ်တိုး) ပမာဏနှင့် ရန်ပုံငွေပေးအပ်ရန် ကြန့်ကြာနေခြင်းအတွက် တွေ့ကြုံနေရသည်‌့ အခက်အခဲများကို မဲဆန္ဒရှင်များထံ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရှင်းပြပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်လုပ်ငန်းအသင်းသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ သန်းကို အောက်ပါရတနာ မြေများသို့ CSR ရန်ပုံငွေဖြင့် ပေးအပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၇-၁၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့ နေ့စွဲနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရထံကို စာဖြင့်အကြောင်းကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ ဖားကန့်ရတနာမြေသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ သန်း၊ မိုးကုတ်၊ မိုင်းရှူး၊ ခန္တီးရတနာမြေများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းစီနှင့် မော်လူး၊ မော်ဟန်ရတနာမြေအတွက် ဒေါ်လာ ၁ သန်းပါရှိပါကြောင်း၊
CSR ဆိုတာ Corporate Social Responsibility လူမှုရေးအရ ပူးပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သည့်နေရာတွင် PPP ကို လိုက်နာရပါကြောင်း၊ ပထမ P ပရောဖစ် အမြတ်အစွန်းအတွက်၊ ဒုတိယ P People ကအလုပ်သမား၊ ဖောက်သည်နှင့် ဒေသခံလူများအတွက်နှင့် တတိယ P Planted သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ် အလေး အနက်ထားရပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များကြောင့် ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်လာပါက ထိခိုက်ခံစားရသော ရပ်ရွာ၏ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် ပူးပေါင်းထည်‌့ဝင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊
မော်လူးရတနာမြေအတွက် CSR ရန်ပုံငွေ US ဒေါ်လာ ၅ သိန်းနှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် အတိုးစုစုပေါင်း သိန်းပေါင်း ၇၁၀၈.၆၈၉ သိန်းကို ၃၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ လွှဲ‌ွပောင်းလက်ခံခဲ့ပါကြောင်း စာဖြင့်ဖြေကြားထားပါသည်။ ယနေ့ဆိုလျှင် နှစ်နှစ်ကျော် ရှိပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ CSR နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည်‌့ရန်ပုံငွေ၊ မည်‌သည်‌့ဖွံ့ဖြိုးရေးမှ ခံစားရခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ နစ်နာခဲ့သော မော်လူးရတနာမြေသည် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၏ ၁၈-၁၀-၂၀၀၁ ခုနှစ် ရက်စွဲပါကြော်ငြာ စာအမှတ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၀/၂၀၀၁) ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အကျယ်အဝန်း ၁၅၈ စတုရန်းမိုင် မှော် ၁၁ မှော် ပါရှိပြီး ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၁ ခုသို့ လုပ်ကွက် ၂၃၅ ကွက် ချထားပေးခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီ ၁၅ ခုမှ လုပ်ကွက် ၁၈၈ ကွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ထုံးတောင်မှော်၊ သယောင်းမှော်၊ အုန်းသျှစ်ကုန်းမှော်များအဖြစ် ထင်ရှားပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊
အဆိုပါရန်ပုံငွေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်လိုသော ဒေသခံများ၏ ဆန္ဒကို မိမိတို့ကိုယ်စားလှယ်များက စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရထံ မျိုးစုံကြိုးစားဆက်သွယ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂-၈-၂၀၁၇ ရက်စွဲဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရန် ညွှန်ကြားသည်မှစ၍ ကော်မတီဖွဲ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်း ၁၄ ခုများ လျာထားတင်ပြခဲ့ခြင်း အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုများကိုလည်း လေးကြိမ်တိုင်တင်ပြခဲ့ခြင်း၊ ဝန်ကြီးချုပ် အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများထံ အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း တာဝန်ရှိသူဟူ၍ မတွေးခဲ့ကြပါကြောင်း၊ အချိန်အခက်အခဲကြောင့် ရက်စွဲများဖြင့် အသေးစိတ်မတင်ပြနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မော်လူးမှကျေးရွာလူထု ခံစားခွင့်ထဲမှ ကသာမြို့ရေပေးဝေ‌ရေးကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လွှမ်းခြုံနိုင်ရန် အတွက် CSR မှ သိန်း ၂၀၀၀ တောင်းခံခြင်းကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်‌့အတွက် ၅-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးအပါအဝင် ဒေသခံ ၆၀၀ ကျော် လက်မှတ်ထိုး ကန့်ကွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယနေ့ထိ ဥပက္ခာပြုထားဆဲလည်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊
အင်းတော်မြို့မှာ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ ၄၇ အုပ်စုနှင့် ကျေးရွာပေါင်း ၁၅၃ ရွာရှိပါကြောင်း၊ ၎င်းရန်ပုံငွေကို ဂွေ့ကြီး၊ ပုံးဟုန်၊ သရောင်းအုပ်စု သုံးအုပ်စုမှ ကျေးရွာ ၁၁ ရွာ၊ အိမ်ထောင်စု ၂၅၀၀ ခန့် အကျုံးဝင်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ၁၃ ရွာ၏လမ်း၊/တံတား ဖွံ့ဖြိုးရေးကို CSR က လုပ်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ငွေကို အခြား ၁၄၂ ရွာအတွက် သုံးစွဲခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယခုနှစ်နှစ်အတွင်း ထိုရွာသည် CSR ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုသာ မျှော်လင့်သည်မှာ မမှားပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်နေသည့် ကာလတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချမည်ဆိုလျှင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တရားမျှတသော စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဒေသခံလူထု ပါဝင်ခွင့်ရရှိမှု၊ ဒေသခံလူထု၏ အသံကို လျစ်လျူရှုခြင်း မပြုဘဲ အလေးအနက်ထား သုံးသပ်မှုတို့ကို မဖြစ်မနေထည်‌့သွင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ယခင်အစိုးရလက်ထက်ကလည်း ကာလတစ်ခုတွိင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ရေကြီးမှုအတွက် CSR ရန်ပုံငွေ ရရှိခဲ့ဖူးပါကြောင်း၊ ထိုအချိန်က ဒီမိုကရေစီအစိုးရ မဟုတ်သည့်အတွက် လူထုမှပွင့်လင်း မြင်သာရေးကို အရေးမဆိုနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မော်လူးရတနာမြေ ဒေသခံများ၏ အထက်ပါမေးခွန်းများကို မေးမြန်းရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေ
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ရတနာနယ်မြေများအလိုက် ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများကို လျော့နည်းစေရန်၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီးမှ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များသို့ ပြပွဲဗဟိုကော်မတီ ရန်ပုံငွေများ ခွဲဝေချထားပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ပြပွဲဗဟိုကော်မတီမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်သန်းကို ဖော်ပြပါအတိုင်း ခွဲဝေချထားပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ မော်လူး၊ မော်ဟန်ရတနာ နယ်မြေအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သန်းရရှိပါကြောင်း၊ ရန်ပုံငွေများကို အရင်းမပျောက် မတည်ထားရှိသော အမြတ်ငွေ/အတိုးငွေ များနှင့်အတူ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု လုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်သန်းနှင့် ညီမျှသည့်မြန်မာငွေကို နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင့် CB ဘဏ်တို့တွင် ခေတ္တယာယီထိန်းသိမ်း ထားရှိခဲ့ပြီး အတိုးရရှိငွေများ အပါအဝင် လျာထားမှု အချိုးအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မော်လူး၊ မော်ဟန်ရတနာနယ်မြေအတွက် လျာထားမှုအချိုးအတိုင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာတစ်သန်းနှင့် ညီမျှသောမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အတိုးရငွေ စုစုပေါင်းကျပ်သန်း ၁၄၂၁.၇၄ ကို ၁၅-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မော်လူးရတနာ နယ်မြေအတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ၂၁-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မော်ဟန်ရတနာနယ်မြေအတွက် ကချင်ပြနယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ၁၆-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်ဖြင့် လည်းကောင်း လက်ခံရရှိကြောင်းလည်း မိမိတို့ ပြန်ကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မော်လူးရတနာ နယ်မြေအတွက် လွှဲပြောင်းရန်ပုံငွေများကို CB Bank Account No. 0038600 100062227 ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းနှင်‌့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင်‌့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးတို့ပါဝင်သည့် သုံးဦးဖြင့် Account ဖွင်‌့လှစ်ထားရှိပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မော်လူးရတနာနယ်မြေအတွက် CSR ရန်ပုံငွေက လုံးဝထုတ်ယူ သုံးစွဲမှု မရှိသေးပါကြောင်းနှင်‌့ လက်ရှိအရင်းငွေတွင် ၇၁၀.၈၆၈ ကျပ်သန်းဖြစ်ပြီး ၁၅-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိရရှိမည့် ဘဏ်အတိုးငွေမှာ ၁၃၁.၈၁၂ ကျပ်သန်း ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် စုစုပေါင်း ၈၄၃.၆၈၁ ကျပ်သန်းဖြစ်ပါကြောင်း၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ရှင်းလင်းပြန်ကြားချက်အရ အင်းတော်မြို့နယ်အတွင်း CSR ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း ၁၃ ခုအတွက် လုပ်ငန်းတန်ဖိုး ကျပ် ၆၉၇ သန်းကို တင်ပြတောင်းခံ လာသည့်အတွက် တိုင်းဒေသကြီး တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ စိစစ်ရေး ကော်မတီသို့ စိစစ်စေခဲ့ရာ အဆိုပါလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုမှာ လိုအပ်ချက်များ ရှိသည့်အတွက် တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ လာရောက်ရှင်းလင်းပေးရန် ဆက်သွယ်ခေါ်ယူ ထားသော်လည်း လာရောက် ရှင်းလင်းပေးခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်း ၁၃ ခုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက် ရရှိပါက ရန်ပုံငွေများကို စနစ်တကျစိစစ်ပြီး အမြန်ဆုံးထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေ ရရှိ/သုံးစွဲလက်ကျန်စာရင်းများကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ငွေစာရင်းဌာနတွင် လစဉ်စာရင်းပြုစု ထားရှိပါကြောင်း၊
သို့ပါ၍ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ပြပွဲဗဟိုကော်မတီရန်ပုံငွေမှ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သော CSR ရန်ပုံငွေများကို ကျောက်မျက်ရတနာတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု များကို လျော့နည်းစေရန်၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများတွင် ကျခံသုံးစွဲနိုင်ရေးကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် လုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် ခြင်းများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။
ဒေါက်တာဒေါ်ပြုံး (အင်းတော်မဲဆန္ဒနယ်) က ဆက်စပ်မေးခွန်း မေးမြန်းပါသည်။
မိမိတို့ အစိုးရ၏ လွှတ်တော်သက်တမ်းသည် ငါးနှစ်ပြည့်တော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစပိုင်းကတည်းက မိမိတို့ကိုပေးထားသော ရန်ပုံငွေသည် နှစ်နှစ်ကျော်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နောက်မိမိတို့၏ ဒေသခံများလည်း နစ်နာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အနီးစပ်ဆုံးဥပမာပေးရမည်ဆိုလျှင် သတင်းစာဆိုလျှင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက ယခင်းက ၂၀၀၀ ကျပ် ပေးဖတ်ရပါကြောင်း၊ ဧပြီလမှစတင်ပြီး ၃၀၀၀ ကျပ်ထိ တက်သွားပါကြောင်း၊ သို့သော် မိမိတို့အင်းတော်မြို့တွင် ၄၀၀၀ ကျပ် ပေးပြီးဖတ်ရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်က ပေးထားသည့် ရန်ပုံငွေသည် ယခုရန်ပုံငွေဖြင့် တွက်ထားသော လမ်း/တံတားသည် အဆိုပါငွြေုဖင့် မည်ကဲ့သို့ လုံလောက်ပါမည်နည်း၊ ထို့ကြောင့် ယခုလိုကြန့်ကြာမှုသည် ဒေသခံများအတွက် အများကြီးနစ်နာပါကြောင်း၊ ကြန့်ကြာအောင် လုပ်နေသည့် တိုင်းဒေသကြီးတည်/ကော်သည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အင်ဂျင်နီယာကို အကြိမ်ရေမည်မျှ ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါသနည်း၊ မိမိသိသရှိသည်မှာ တစ်ခါမှ ဆင့်မခေါ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးတည်/ကော်ကလည်း မသိရှိပါကြောင်းကို အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ကြန့်ကြာအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သော တိုင်းဒေသကြီး တည်ကော်အဖွဲ့ကို မည်ကဲ့သို့ အရေးယူပေးမည်နည်းကို ဆက်စပ်မေးခွန်းအနေဖြင့် မေးမြန်းပါသည်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေ
ဝန်ကြီးဌာန၏ CSR ဆိုသည့် ရန်ပုံငွေများသည် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ လူမှုဘဝ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက်ကို ဖော်ဆောင်ပေးရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် မိမိတို့က လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ငွေကြေးကိုလည်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို အတိုး/အရင်းလွှဲပြောင်း ပေးအပ်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် လုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ပွင်‌့လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မိမိတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့် မဟုတ်တော့ ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။